ग’र्भवती महिला लिएर आएको एम्बुलेन्स धुलिखेलको डाँडागाँउमा दु’र्घटना ! – Everest Pati
काठमान्डौ , बीपी राजमार्गकाे धुलिखेल नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ डाँडागाउँमा एम्बुलेन्स दु’र्घटना भएको छ । सिन्धुलीबाट ग’र्भवती महिला लिएर आएको ज १ च १४३९ नम्बरको एम्बुलेन्स अ’नियन्त्रित भएर सडकमै पल्टिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ ।एम्बुलेन्स चैत्र २१ गते सुक्रबार दु’र्घटनामा परेको हो । गर्भवती महिलालाई धुलिखेल अस्पताल पुर्याइएको डिएसपी कुमार विक्रम थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ग’र्भवती महिला सहित एम्बुलेन्समा सवार सबैको अवस्था सामान्य छ ।
उता ज्वरोका बि’रामी बोक्न नमान्ने अस्पतालको एम्बुलेन्सले भाडामा यात्रु बोक्ने गरेको छ । सामान्य ज्वरो र रुघाखोकीका बि’रामी बोक्न नमान्ने जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालिकोटको हरियो अस्थायी नं. प्लेटको एम्बुलेन्सले भाडामा यात्रु बोक्ने गरेको हो ।लकडाउनको समयमा अन्यसवारी साधन चल्ने नभएकाले मौकाको फाइदा उठाउँदै एम्बुलेन्सले यात्रु बोक्ने गरेको छ । बिहीबार राति जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको एम्बुलेन्सले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट ७ जना यात्रु बोकेर कालिकोट ल्याएको छ । बुधबार रति कालिकोटबाट आएको एम्बुलेन्सले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट ७ जना यात्रुलाई ४ हजारका दरले भाडा लिएर कालिकोट ल्याएको यात्रुले जानकारी दिएका छन्।
सुर्खेतबाट एम्बुलेन्समा यात्री बनेर आएका रास्कोट नगरपालिका-६ का सनेश शाहीले ज्वरो आएको छैन भने तपाईलाई लैजान सकिन्छ भनी ड्राइभरले भनेपछि आफू बिहीबार राति कालिकोट पुगेको बताए । आफूले एम्बुलेन्स चालकलाई ४ हजार भाडा तिरेको उनले जानकारी दिए ।जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका सूचना अधिकारी कटकबहादुर महतले एम्बुलेन्सले भाडामा यात्रु बोकेको विषयमा गु’नासो आएको र सोधपुछ गरिरहेको बताए । ‘यसबारे मलाई पूरा जानकारी छैन। गुनासो आएको छ।’ महतले भने- ‘पुष्टि भए तत्काल कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउछौँ ।